267s Manao régime mirevy amin&#39;ny fety amin&#39;ny taonjato faha-9 images and subtitles
Izaho Andrew Hazelden ary efa mpanefy tanimanga nandritra ny 30 taona mahery aho. Heveriko fa iray amin'ireo mahavariana amin'ny fahitana ny tantara dia hoe namorona volamena izy ireo tsy nisy volamena ary noheverina ho alchemist izy ireo. Mahatsapa ianao fa mety ho resy amin'ny fijerena ny iridescence ao anaty vilany mirehitra izay mahatonga anao hihevitra fa any amin'ny tontolo hafa ianao. Ny luster dia ny teknika izay ampiasainao amin'ny sulphides metaly mamorona rides iridescent amin'ny vilany. Izy io dia somary masiaka sy saro-pady teknika. Ity lovia ity dia dika mitovy amin'ny lovia Irak tamin'ny taonjato faha-9. Tena nampiasaiko tamin'ny fanaovana ny tanimanga ity tany tanimanga avy any Italia avy any Deruta izay loko marevaka. Ka alaiko ny bola bola tanimanga lanjan'ny lanjan'ny lanja fotsiny ary atsipy amin'ny kodian'ny mpanefy azy izany ary mety haka dimy minitra hanipy ilay endrika. Avela andro maromaro hiadiana ho mafy ny hoditra. Vantany vao sarotra ny hoditra dia avadika ary miverina ny tongotra. Raha vao avadika ny tongotra dia mila ho maina tanteraka amin'ny masoandro ary rehefa afaka izany, dia nitifitra voalohany izy, izay ny fitifirana biscuit avy eo nalaina ary narotsaka ho tonga fotsy maso izay voalohany indrindra dia ny omby vita am-bifotsy avy eo dia voaroaka indray. Ny dingana manaraka dia ny fandokoana azy miaraka amin'ny pigment luster. Ny pigment izay ampiasaiko handokoana an'io vilia io dia vita amin'ny varahina sulphide nefa misy volafotsy ao anatiny ary azo anaovana ny oxide mena sy tanimanga koa izy io. Avy eo dia kalkinina izany ary alefa any amin'ny mari-pana mamirapiratra - 650 centigrade. Rehefa vita ny kalômera dia nalaina sy tany ary ary avy eo afangaro amin'ny vinaingitra dia rehefa miloko izany. Ny famolavolana teboka dia nalaina tamina lovia Irak tamin'ny taonjato faha-9. Raha ny tena izy dia ahoana no fomba hiasana izay borosy nampiasain'izy ireo andtried mba hampiasa borosy mitovy. Ny tifitra mitera-by dia mila ny kilao iray izay mahavita mampihena ny oxygen manandrana mamorona rivo-piainana ianao izay tsy misy oksizenina izay mampihena ny pig pige hamoaka ny volafotsy sy ny varahina. Manamboatra setroka ianao Ny fomba anaovako izany dia ny fametrahana tapa-kitay kely ho ao anatin ny kilaon ny alàlan ny lavaka mpitsikilo ary manosika ny oxygen. Avy eo avelanao hiverina indray ny oksizenina mandritra ny fotoana fohy ary izany fitrandrahana sy fampihenana ny spasm dia zava-dehibe hamoronana ilay fisokosana amin'ny vilany. Rehefa mivoaka avy ao anaty kilao ny vilany dia mbola hita fa maloto ihany rakotra tanimanga dia tsy maintsy mikosokosoka amin'ny ozinina indray ianao. Azonao atao ny mahafantatra raha ny fipoahana baomba no niasa na tsia satria raha niasa izy dia manomboka hahita mena na volafotsy. Ka io no ampahany tena magie dia ny fanariana ny vilany aorian'ny tifitra tsy azonao antoka izay hitranga ary tsy azo vinavinaina ny valiny fa ny tsy fanelingelenana dia toa miaina fiainana samirery. Indraindray ianao dia tokony hikapoka ny vilany mankany amin'ilay hazavana mba hahitana ny tsy fanarahan-dalàna koa miankina amin'ny zoro izay hitanao ny vilany dia miankina amin'ny hoe mahita ny tsy fanarahan-dalàna na tsia. Ka toa tsy misy mistery izany
Manao régime mirevy amin&#39;ny fety amin&#39;ny taonjato faha-9
< start="7.76" dur="5.24"> Izaho Andrew Hazelden ary efa mpanefy tanimanga nandritra ny 30 taona mahery aho. >
< start="13" dur="3.96"> Heveriko fa iray amin'ireo mahavariana amin'ny fahitana ny tantara >
< start="16.96" dur="2.42"> dia hoe namorona volamena izy ireo >
< start="19.38" dur="2.2"> tsy nisy volamena >
< start="21.58" dur="2.8"> ary noheverina ho alchemist izy ireo. >
< start="24.38" dur="1.92"> Mahatsapa ianao fa mety ho resy >
< start="26.3" dur="2.96"> amin'ny fijerena ny iridescence ao anaty vilany mirehitra >
< start="29.26" dur="5.4"> izay mahatonga anao hihevitra fa any amin'ny tontolo hafa ianao. >
< start="34.66" dur="5.28"> Ny luster dia ny teknika izay ampiasainao amin'ny sulphides metaly >
< start="39.94" dur="4.8"> mamorona rides iridescent amin'ny vilany. >
< start="44.74" dur="4.06"> Izy io dia somary masiaka sy saro-pady teknika. >
< start="48.8" dur="6.14"> Ity lovia ity dia dika mitovy amin'ny lovia Irak tamin'ny taonjato faha-9. >
< start="54.94" dur="7.92"> Tena nampiasaiko tamin'ny fanaovana ny tanimanga ity tany tanimanga avy any Italia avy any Deruta >
< start="62.86" dur="4.8"> izay loko marevaka. >
< start="67.66" dur="1.46"> Ka alaiko ny bola bola tanimanga >
< start="69.12" dur="4.48"> lanjan'ny lanjan'ny lanja fotsiny ary atsipy amin'ny kodian'ny mpanefy azy izany >
< start="73.6" dur="7.2"> ary mety haka dimy minitra hanipy ilay endrika. >
< start="80.8" dur="4.58"> Avela andro maromaro hiadiana ho mafy ny hoditra. >
< start="85.38" dur="4.33"> Vantany vao sarotra ny hoditra dia avadika ary miverina ny tongotra. >
< start="89.71" dur="5.77"> Raha vao avadika ny tongotra dia mila ho maina tanteraka amin'ny masoandro >
< start="95.48" dur="5.12"> ary rehefa afaka izany, dia nitifitra voalohany izy, izay ny fitifirana biscuit >
< start="100.6" dur="4.54"> avy eo nalaina ary narotsaka ho tonga fotsy maso >
< start="105.14" dur="3.689"> izay voalohany indrindra dia ny omby vita am-bifotsy >
< start="108.829" dur="3.651"> avy eo dia voaroaka indray. >
< start="112.48" dur="4.16"> Ny dingana manaraka dia ny fandokoana azy miaraka amin'ny pigment luster. >
< start="116.64" dur="7.26"> Ny pigment izay ampiasaiko handokoana an'io vilia io dia vita amin'ny varahina sulphide >
< start="123.9" dur="4.46"> nefa misy volafotsy ao anatiny >
< start="128.36" dur="4.86"> ary azo anaovana ny oxide mena sy tanimanga koa izy io. >
< start="133.22" dur="6.96"> Avy eo dia kalkinina izany ary alefa any amin'ny mari-pana mamirapiratra - 650 centigrade. >
< start="140.18" dur="3"> Rehefa vita ny kalômera dia nalaina sy tany ary >
< start="143.18" dur="6.72"> ary avy eo afangaro amin'ny vinaingitra dia rehefa miloko izany. >
< start="150.12" dur="6.06"> Ny famolavolana teboka dia nalaina tamina lovia Irak tamin'ny taonjato faha-9. >
< start="156.18" dur="4.6"> Raha ny tena izy dia ahoana no fomba hiasana izay borosy nampiasain'izy ireo andtried mba hampiasa borosy mitovy. >
< start="160.78" dur="6.15"> Ny tifitra mitera-by dia mila ny kilao iray izay mahavita mampihena ny oxygen >
< start="166.93" dur="3.59"> manandrana mamorona rivo-piainana ianao izay tsy misy oksizenina >
< start="170.52" dur="5.68"> izay mampihena ny pig pige hamoaka ny volafotsy sy ny varahina. >
< start="176.2" dur="1.46"> Manamboatra setroka ianao >
< start="177.66" dur="6.96"> Ny fomba anaovako izany dia ny fametrahana tapa-kitay kely ho ao anatin ny kilaon ny alàlan ny lavaka mpitsikilo >
< start="184.62" dur="2.84"> ary manosika ny oxygen. >
< start="187.46" dur="4.68"> Avy eo avelanao hiverina indray ny oksizenina mandritra ny fotoana fohy >
< start="192.14" dur="9.069"> ary izany fitrandrahana sy fampihenana ny spasm dia zava-dehibe hamoronana ilay fisokosana amin'ny vilany. >
< start="201.5" dur="5.129"> Rehefa mivoaka avy ao anaty kilao ny vilany dia mbola hita fa maloto ihany >
< start="206.629" dur="2.351"> rakotra tanimanga >
< start="208.98" dur="8.82"> dia tsy maintsy mikosokosoka amin'ny ozinina indray ianao. >
< start="217.8" dur="5.4"> Azonao atao ny mahafantatra raha ny fipoahana baomba no niasa na tsia >
< start="223.2" dur="4.4"> satria raha niasa izy dia manomboka hahita mena na volafotsy. >
< start="227.6" dur="5.43"> Ka io no ampahany tena magie dia ny fanariana ny vilany aorian'ny tifitra >
< start="233.03" dur="5.51"> tsy azonao antoka izay hitranga ary tsy azo vinavinaina ny valiny >
< start="238.54" dur="5.6"> fa ny tsy fanelingelenana dia toa miaina fiainana samirery. >
< start="244.18" dur="7.1"> Indraindray ianao dia tokony hikapoka ny vilany mankany amin'ilay hazavana mba hahitana ny tsy fanarahan-dalàna >
< start="251.28" dur="2.819"> koa miankina amin'ny zoro izay hitanao ny vilany dia miankina amin'ny hoe >
< start="254.099" dur="2.421"> mahita ny tsy fanarahan-dalàna na tsia. >
< start="256.52" dur="7.42"> Ka toa tsy misy mistery izany >